नुकिन्टा बनाम अक्सीकोडोन: भिन्नता, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि उत्तम छ - औषधि बनाम मित्र | अगस्ट 2021
घरपालुवा जनावर कम्पनी, समाचार स्वास्थ्य शिक्षा, कल्याण चेकआउट कम्पनी, स्वास्थ्य शिक्षा औषधि बनाम मित्र समुदाय औषधि जानकारी, स्वास्थ्य शिक्षा कम्पनी, चेकआउट कम्पनी, औषधि जानकारी समुदाय, कम्पनी औषधि जानकारी स्वास्थ्य शिक्षा, समाचार समाचार कल्याण
मुख्य >> औषधि बनाम मित्र >> नुकिन्टा बनाम अक्सीकोडोन: भिन्नता, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि उत्तम छ
नुकिन्टा र अक्सीकोडोन दुई एफडीए-अनुमोदित छन् ओपियोइड निर्धारित औषधिहरू गम्भिर, तीव्र दुखाइको उपचारको लागि संकेत गरियो। तिनीहरू सामान्यतया दुखाइको लागि प्रयोग गरिन्छ जुन गैर-ओपिओइड औषधिहरू मार्फत राहत पाउन सक्दैन, वा जब बिरामीले अन्य विकल्पहरू सहन सक्दैनन्। दुबै दुखाई औषधिहरूलाई मादक पदार्थको रूपमा वर्गीकृत गरिएको छ ( तालिका दोस्रो ), यसको मतलब उनीहरूसँग दुर्व्यवहार वा निर्भरताको लागि उच्च क्षमता छ।
नुकिन्टाले काम गर्ने तरिका पूर्ण रूपमा बुझिएको छैन। केही अध्ययनहरूले देखाए कि नुकिन्टा म्यू रिसेप्टर (पीडा रिसेप्टर) एगोनिस्ट र नोरिपाइनफ्रिन रिउपटेक इनहिबिटर हो, जसले पीडाबाट राहत पाउन सक्छ। ऑक्सीकोडनले मस्तिष्कमा म्यू रिसेप्टर्सलाई बाँधेर काम गर्दछ, जसले पीडा संकेतलाई कमजोर वा अवरोध गर्दछ, जसले पीडा राहत गर्दछ।
किनभने दुबै औषधिहरू धेरै शक्तिशाली छन्, तिनीहरू सामान्यतया दुखाइ व्यवस्थापन अवस्थाहरूमा प्रयोग गर्दछन् जहाँ एक हल्का (गैर-मादक पदार्थ) को दुखाइ कम गर्ने प्रभावकारी हुँदैन वा सहन गर्न सकिदैन। यद्यपि दुबै औषधिहरू गम्भीर दुखाइका लागि प्रयोग गरिएको छ, तिनीहरूसँग धेरै भिन्नताहरू छन्, जुन हामी तल उल्लिखित गर्नेछौं।
‌न्युइन्टा र अक्सीकोडोन बीचका मुख्य भिन्नताहरू के के हुन्?
नुकिन्टा (टेपेन्टाडोल) एक ओपिओइड, वा मादक पदार्थ, एनाल्जेसिक (पेनकिलर) हो। यो ब्रान्ड नाममा दुबै तत्काल रिलीज र विस्तारित-रिलीज ट्याब्लेटको रूपमा उपलब्ध छ। विस्तारित-रिलीज ट्याब्लेटलाई नुकिन्टा ईआर भनिन्छ। प्रारम्भिक खुराक mg० मिलीग्रामदेखि १०० मिलीग्राम प्रत्येक चार देखि छ घण्टा दुखाइको लागि आवश्यक हुन्छ। खुराक तपाईंको डाक्टरले समायोजित गर्न सक्दछ, र अधिकतम खुराक प्रति दिन mg०० मिलीग्राम हो।
Oxycodone एक जेनेरिक ओपिओइड एनाल्जेसिक (र oxycodone आईआर, तत्काल रिलीज को लागी पनि) र ब्रान्ड-नाम रूप मा Oxycontin को रूपमा उपलब्ध छ - एक विस्तारित रिलीज ट्याब्लेट। खुराक फरक-फरक हुन्छ, तर तत्काल रिलीज हुने अक्सीकोडोन ट्याब्लेटहरूको लागि एक विशिष्ट खुराक four देखि १ mg मिलीग्राम प्रत्येक to देखि hours घण्टा दु: खको लागि आवश्यक छ।
‌न्युइन्टा र अक्सीकोडोन बिचको मुख्य भिन्नता
औषधि वर्ग ओपियोइड (मादक पदार्थ) एनाल्जेसिक ओपियोइड (मादक पदार्थ) एनाल्जेसिक
जेनेरिक / ब्रान्ड नाम के हो? जेनेरिक: टेपेन्टाडोल ब्रान्ड: OxyIR (तत्काल रिलीज), Oxycontin (लामो-अभिनय)
कुन फार्म (हरू) ड्रग भित्र आउँछ? तत्काल रिलीज ट्याब्लेट
विस्तारित-रिलिज ट्याब्लेट तत्काल रिलीज ट्याब्लेट
तत्काल रिलीज क्याप्सूल
मानक खुराक के हो? सुरुमा:
Mg० मिलीग्रामदेखि १०० मिलीग्राम प्रत्येक to देखि hours घण्टा आवश्यकता अनुसार। आवश्यकता अनुसार डाक्टरले डोज समायोजित गर्न सक्दछ। उपचारको पहिलो दिनमा day०० मिलीग्राम प्रति दिन, त्यसपछि अधिकतम खुराक पहिलो दिन पछि प्रति दिन mg०० मिलीग्राम हो तत्काल रिलीज ट्याब्लेट:
To देखि १ mg मिलीग्राम प्रत्येक to देखि hours घण्टा आवश्यकता अनुसार
२० मिलीग्राम प्रत्येक १२ घण्टा
विशिष्ट उपचार कति लामो हुन्छ? छोटो अवधि, उपचार को अवस्था (जस्तै पुरानो पीडा) र प्रतिक्रिया को आधार मा अब प्रयोग गर्न सकिन्छ छोटो अवधि, उपचार को अवस्था (जस्तै पुरानो पीडा) र प्रतिक्रिया को आधार मा अब प्रयोग गर्न सकिन्छ
Nucynta मा सबै भन्दा राम्रो मूल्य चाहनुहुन्छ?
Nucynta मूल्य सचेतका लागि साइन अप गर्नुहोस् र जब मूल्य परिवर्तन हुन्छ फेला पार्नुहोस्!
शर्तहरु ‍न्युइन्टा र अक्सीकोडोन द्वारा उपचार गरिएको
नुकिन्टा र अक्सीकोडोन दुबैलाई उपचारको लागि एक संकेत छ, जुन वयस्कमा तीव्र दर्दको प्रबन्ध गर्नु हो जुन ओपिओइड एनाल्जेसिकको आवश्यकताको लागि पर्याप्त गम्भिर हुन्छ, र जब वैकल्पिक उपचारहरू अपर्याप्त हुन्छन् वा बर्दास्त हुँदैनन्।
सर्त नुकिन्टा ऑक्सीकोडोन
वयस्कमा गम्भिर दुखाइको व्यवस्थापन जुन ओपिओइड एनाल्जेसिकको आवश्यकताको लागि पर्याप्त गम्भीर हुन्छ, र जब वैकल्पिक उपचारहरू अपर्याप्त हुन्छन्। हो हो
के ‌न्युकाइन्टा वा अक्सीकोडोन बढी प्रभावकारी छ?
मा अध्ययन तुरुन्त रिलीज नुसिन्टाको तुलना तुरून्त रिलीज अक्सीकोडोनसँग मध्यमदेखि गम्भीर गम्भीर दुखाइ भएका दुबै औषधिहरू सँगसँगै दुबै औषधि समान रूपमा सुरक्षित र कमरको दुखाइको उपचारमा प्रभावकारी पाइएको थियो। न्यूकेन्टा बिरामीहरूले पेटसँग सम्बन्धित कम प्रतिकूल प्रभावहरू देखाएका थिए।
मा अध्ययन नुकिन्टा वा अक्सीकोडोन लिने बिरामीहरूको दुरुपयोग सम्भावना तुलना गर्दा, नुकिन्टाले दुरुपयोगको लागि कम सम्भावना पाइएको थियो।
तपाईका लागि सबैभन्दा प्रभावकारी औषधि तपाईको डाक्टरले मात्र निर्धारण गर्नु पर्छ जसले तपाईको मेडिकल अवस्था (हरू), इतिहास, र तपाईले लिनुहुने अन्य औषधिहरू हेर्ने छ।
कभरेज र लागत तुलना- न्यूकीन्टा बनाम अक्सीकोडोन
राज्य कानूनको कारण, यदि तपाइँ पहिलो पटक ओपियोइड पेन्किललर प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ भने, यस्तो सम्भावना हुन्छ कि तपाईंले थोरै परिमाण पाउनुहुनेछ।
Nucynta संग बीमा कभरेज भिन्न हुन्छ। यो अधिक महँगो छ र ब्रान्ड नाममा मात्र उपलब्ध छ, तपाईंको प्रतिलिपि अधिक हुन सक्छ, वा औषधिलाई एक आवश्यक हुन सक्छ पूर्व प्राधिकरण तपाईंको बीमा कम्पनीबाट। नुकिन्टा सामान्यतया मेडिकेयर भाग डी द्वारा कभर हुँदैन, नुकिन्टा mg० मिलीग्राम, tablets० ट्याब्लेटको लागि सामान्यतया tablets २ tablets० को आसपास हुन्छ तर तपाईं यसलाई सिंगलकेयर छुटमा २११ डलरसम्म कममा लिन सक्नुहुन्छ।
Oxycodone सामान्यतया बीमा साथै मेडिकेयर भाग डी द्वारा कभर गरिएको छ 30०, mg मिलीग्राम ट्याब्लेटको लागि बाहिरको जेबको मूल्य $ १०० को लागी लाग्न सक्छ तर तपाईं सहभागी फार्मेसीहरूमा एकल कुपन प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ र $ $$ मा सुरु गर्न सक्नुहुनेछ।
सामान्यतया बीमा द्वारा कभर? फरक हुन्छ हो
सामान्यतया चिकित्सा भाग डी द्वारा कभर? हैन हो
मानक खुराक Mg० मिलीग्राम, # tablets० ट्याब्लेटहरू Mg मिलीग्राम, # tablets० ट्याब्लेटहरू
विशिष्ट मेडिकेयर पार्ट डी कोपे । 95- $ 482 । २- $ $
एकलकेयर लागत 1 २११ + । -$- $ .२
‌न्युकाइन्टा बनाम अक्सीकोडोनको साझा साइड इफेक्टहरू
नुकाइन्टाको सबैभन्दा सामान्य दुष्प्रभावहरू मतली, बान्ता, निन्द्रा, चक्कर आना, कब्ज, सुख्खा मुख, र खुजली हुन्। गम्भीर श्वासप्रश्वासको उदासीनता (सास फेर्न ढिलो भई, पर्याप्त अक्सिजन पाउनु हुँदैन), जुन जीवन-धम्की वा घातक हुन सक्छ।
अक्सीकोडोनको साथ, सहि प्रतिशत रिपोर्ट हुँदैन, बाहेक यसका असरहरू बिरामीहरूको%% भन्दा बढी वा बराबरमा देखा पर्दछ। सबैभन्दा सामान्य साइड इफेक्टहरू मतली, कब्ज, बान्ता, टाउको दुख्ने, प्रुरिटस (खुजली), अनिद्रा, चक्कर, कमजोरी, र तन्द्रा हुन्। गम्भीर प्रतिक्रियात्मक प्रतिक्रियाहरूमा श्वासप्रसाद उदासीनता, श्वासप्रश्वासको गिरफ्तारी (श्वास रोकिने), ह्रदयको गिरफ्तारी (अचानक हृदयघात हुने श्वास, श्वासप्रश्वास, र चेतना), कम रक्तचाप, र / वा आघात समावेश हुन सक्छ।
गम्भीर जोखिमहरूको कारणले गर्दा, यो महत्त्वपूर्ण छ कि यदि तपाईंले नुकिन्टा वा अक्सीकोडोन लिनुभयो, कि तपाईंले सोच्नुभएकै जस्तो औषधि लिनुहुन्छ र अतिरिक्त डोज पनि लिनुहुन्न। तपाईलाई श्वासप्रश्वासको उदासीनताका लागि पनि अनुगमन गरिनु पर्छ, विशेष गरी जब यी औषधिहरू मध्ये कुनै एक सुरू गर्न वा खुराक परिवर्तनको बेला।
एक दिनमा कति टाईलेनोल can लिन सक्छु
अन्य प्रतिकूल घटनाहरू हुन सक्छन्। साइड इफेक्टहरूको पूर्ण सूचीको लागि तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग परामर्श लिनुहोस्।
मतली हो %०% हो ≥≥%
बान्ता हो १%% हो ≥≥%
कब्ज हो %% हो ≥≥%
सुख्खा मुख हो %% हो % रिपोर्ट गरिएको छैन
तन्द्रा हो पन्ध्र% हो ≥≥%
चक्कर हो २%% हो ≥≥%
खुजली हो %% हो ≥≥%
स्रोत: डेलीमेड ( नुकिन्टा ), डेलीमेड ( ऑक्सीकोडोन )
‌न्युकाइन्टा बनाम अक्सीकोडोनको ड्रग अन्तर्क्रिया
बेंजोडाइजेपाइन वा अन्य सीएनएस डिप्रेसन्टहरू प्रयोग गर्दै, अन्य लगायत ओपियोइड औषधिहरू , न्यूकेन्टा वा अक्सीकोडोनको संयोजनले कम रक्तचाप, श्वासप्रश्वास अवसाद, गहिरो बेहोरा, कोमा, र / वा मृत्यु निम्त्याउन सक्छ। संयोजन हटाउनु पर्छ। यद्यपि, यदि कुनै अर्को विकल्प उपलब्ध छैन भने सबैभन्दा छोटो समय अवधिको लागि प्रत्येक औषधीको न्यूनतम खुराक प्रयोग गर्नुपर्दछ, र बिरामीलाई नजिकबाट निरीक्षण गर्नुपर्दछ, विशेष गरी उपचारको सुरूमा र डोजमा कुनै परिवर्तनको बेला।
नुकोन्टा वा अक्सीकोडोन सेवन गर्दा औषधी जो सेरोटोनिन बढाउँदछ यसले पनि यसको जोखिम बढाउन सक्छ सेरोटोनिन सिन्ड्रोम , धेरै घातक सेरोटोनिनको निर्माणको कारण एक जीवन-जोखिमपूर्ण अवस्था। यी औषधिहरूमा सेरोटोनिन पुनःअपटेक इनहिबिटरहरू, मांसपेशी शिथिलता, एमएओ अवरोधकर्ताहरू (एमएओ इनहिबिटरहरू न्यूसिन्टा वा अक्सीकोडोनको १ days दिन भित्र प्रयोग गर्न मिल्दैन), र माइग्रेनको लागि ट्रिप्टनहरू जस्ता एन्टिडिप्रेसन्टहरू समावेश गर्दछ।
अक्सीकोडोनलाई केहि औषधिहरू सेवन गर्दा जुन CYP3A4 वा CYP2D6 भनिने एन्जाइमले मेटाबोलिज गरिन्छ औषधि अन्तर्क्रियामा परिणामित हुन सक्छ। यी औषधिहरू एन्जाइम इनहिबिटरहरू भनेर चिनिन्छन र म्याक्रोलाइड एन्टिबायोटिक, एजोल एन्टिफंगल र प्रोटीज अवरोधकहरू समावेश गर्दछ। अक्सीकोडोनसँगै उनीहरूलाई प्रयोग गर्नाले ओपिओइडको उच्च स्तरमा परिणामित हुन सक्छ, जुन धेरै खतरनाक हुन सक्छ। यी ड्रग्सले ऑक्सीकोडोनसँग अन्तर्क्रिया गर्दछ, तर नुकिन्टा होइन।
एन्जाइम इन्डुसेसर भनेर चिनिने अन्य ड्रग्सले इनहिबिटरको विपरित प्रभाव पार्छ, ओपिओइडको स्तर कम गर्छ ता कि यो प्रभावकारी छैन वा यसले फिर्ती लक्षणहरू पनि निम्त्याउन सक्छ। इन्डुसेसरले न्यूकेन्टा वा अक्सीकोडोनलाई असर गर्न सक्दछ।
औषधी अन्तरक्रियाहरूको पूर्ण सूचीको लागि तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग परामर्श लिनुहोस्।
औषधि ड्रग क्लास नुकिन्टा ऑक्सीकोडोन
टिजानिडाइन मांसपेशी आराम हो हो
फ्लुओक्सेटीन Antidepressants हो हो
Tranylcypromine MAO अवरोधकर्ताहरू हो हो
टोल्टेरोडाइन एन्टिकोलिनर्जिक ड्रग्स हो हो
Zolmitriptan माइग्रेनका लागि ट्राइप्टनहरू हो हो
रिटोनाभिर CYP3A4 वा CYP2D6 अवरोधकर्ताहरू हैन हो
Phenytoin CYP3A4 inducers हो हो
‌न्युकाइन्टा र अक्सीकोडोनको चेतावनी
दुबै नुकिन्टा र अक्सीकोडोनमा बक्सि warning चेतावनीहरू छन्, जुन एफडीए (संयुक्त राज्य खाद्य र औषधि प्रशासन) द्वारा आवश्यक कडा चेतावनी हो।
ओपिओइड ड्रग्सको लत, दुरुपयोग, र दुरुपयोगको जोखिम छ। यसले अधिक मात्रा र मृत्यु निम्त्याउन सक्छ। ओपियोइड लिनु अघि जोखिमका लागि बिरामीहरूलाई मूल्या should्कन गर्नुपर्दछ र होसियारीपूर्वक अवलोकन गरिनु पर्दछ।
ओपियोइड्सले गम्भीर, जीवन-खतरा, वा घातक श्वासप्रश्वास उदासीनता निम्त्याउन सक्छ। बिरामीहरूलाई होशियारीपूर्वक निरीक्षण गरिनु पर्दछ, विशेष गरी जब उपचार सुरु हुन्छ, र डोज परिवर्तन पछि।
दुर्घटनात्मक इन्जेसन, विशेष गरी बच्चाहरू द्वारा, घातक ओभरडोजको परिणाम दिन सक्छ। बिरामीहरूले ओपिओइडहरू बच्चाहरूको पहुँचबाट बाहिर सुरक्षित गर्नुपर्दछ, र यदि सम्भव भएमा लक र कुञ्जीमुनि।
गर्भावस्थाको अवधिमा ओपिओइडको लामो प्रयोगले नवजात ओपिओइड निकासी सिन्ड्रोम निम्त्याउन सक्छ, जुन यदि पहिचान गरिएको र उपचार गरिएको छैन भने जीवन खतरामा पार्न सक्छ।
बेन्जोडाइजेपाइनहरू जस्तै Xanax, वा अन्य CNS डिप्रेसन्ट्स, जस्तै अन्य ओपिओइड्स (वा मदिरा) को उपयोग गर्नाले गहिरा सेडेशन, श्वासप्रसाद डिप्रेसन, कोमा, र मृत्युको परिणाम हुन सक्छ। यदि सम्भव भएमा ओपियोड्स र बेन्जोडियाजेपाइनहरूको संयोजनलाई हटाउनु पर्दछ। अन्य विकल्पका कारण काम नगरेको बिरामीहरूले यो संयोजन लिनुपर्दछ कम समयको रकमको लागि न्यूनतम प्रभावकारी खुराक तोकिनुपर्दछ र नजिकबाट निरीक्षण गर्नुपर्दछ।
महत्त्वपूर्ण श्वसन डिप्रेसनको साथ बिरामीहरू, असंतोषयुक्त सेटिंग्समा तीव्र / गम्भीर ब्रोन्कियल अस्थमा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अवरोध, वा कुनै पनि अवयवहरूको अतिसंवेदनशीलता न्यूकीन्टा वा अक्सीकोडोन प्रयोग गर्नुहुन्न।
न्यूकिएन्टा वा अक्सीकोडोन पुरानो फुफ्फुसीय रोग वा वृद्ध वा दुर्बल रोगी बिरामीहरूमा प्रयोग गर्नु हुँदैन।
सेरोटोनिन सिन्ड्रोम हुन सक्छ, विशेष गरी एन्टिडिप्रेसन्ट्स जस्ता सेरोटोनिनको स्तर बढाउने औषधीहरूको प्रयोगसँग। मानसिक स्थिति परिवर्तनहरू (आन्दोलन, मतिभ्रमण), रक्तचाप परिवर्तन, असंतोष, र / वा पेट लक्षणहरू जस्तै मतली, बान्ता, वा पखालामा बिरामीहरूलाई अनुगमन गरिनु पर्छ। यदि यी लक्षणहरू मध्ये कुनै देखा परेमा बिरामीले तुरुन्त मेडिकल खोजी लिनु पर्छ किनभने सेरोटोनिन सिन्ड्रोम एकदम खतरनाक हो र घातक हुन सक्छ।
एड्रेनल अपर्याप्तता हुन सक्छ, सामान्यतया एक महिना पछि। यदि उनीहरूले मतली, बान्ता, भोक, थकान, कमजोरी, चक्कर, र / वा कम रक्तचापको अनुभव गरेमा उपचार लिनु पर्छ।
न्यूकेन्टा वा अक्सीकोडोनले कम रक्तचाप निम्त्याउन सक्छ।
नुकिन्टा वा अक्सीकोडोन बिरामी चेतना वा कोमामा बिरामीहरूमा प्रयोग गर्नु हुँदैन।
नुकिन्टा वा अक्सीकोडोनले दौरा विकार भएका बिरामीहरूमा दौरा हुने जोखिम बढाउन सक्छ।
नुकिन्टा वा अक्सीकोडोन अचानक फिर्ता लिन हुँदैन, तर यसको सट्टा बिस्तारै टेपर हुनु पर्छ।
गम्भीर कलेजो वा मिर्गौला समस्या भएका बिरामीहरूमा न्यूकेन्टा प्रयोग गर्नु हुँदैन।
ड्राइभ नगर्नुहोस् वा मसिनरी अपरेट नगर्नुहोस् जबसम्म तपाईंलाई थाहा हुँदैन कि कसरी औषधिले तपाईंलाई असर गर्छ।
असुरक्षित ओपिओड्स आगन्तुकहरू लगायत घरमा जो कोहीलाई घातक जोखिम हुन सक्छ। सुरक्षित रूपमा स्टोर गर्नुहोस्, बच्चाको नजर र पहुँचभन्दा बाहिर, र स्थानमा अन्यले पहुँच योग्य छैन। तपाईको स्वास्थ्यसेवा पेशेवरलाई सोध्नुहोस् कि कसरी तपाईको क्षेत्रमा प्रयोग नगरिएका ओपिओड्सको डिस्पोजल गर्ने।
कुनै ओपिओइड लिने बेला, डाक्टरलाई नालोक्सोनको पर्चाको बारेमा कुरा गर्नुहोस्, एक आपतकालीन अवस्थामा ओपियोइड ओभरडोजको उपचार गर्ने औषधि।
किनकि महिलामा कुनै कन्ट्रोलित अध्ययन छैन, न्यूक्न्टा वा अक्सीकोडोन गर्भावस्थामा प्रयोग गर्नु हुँदैन। गर्भावस्थामा ओपिओइड्स प्रयोग गर्दा, चाहे चिकित्सा वा गैर मेडिकल प्रयोगका लागि, बच्चामा शारीरिक निर्भरता पैदा गर्न सक्दछ, र नवजात शिशु ओपिओइड निकासी सिन्ड्रोम जन्म दिन पछि लिन सक्छ।
‍न्युइन्टा बनाम अक्सीकोडोनको बारेमा प्राय: सोधिने प्रश्नहरू
नुकिन्टा भनेको के हो?
नुकिन्टा गम्भीर पीडाको उपचारमा प्रयोग गरिएको एक मादक पदार्थ, वा ओपिओइड, पेन्किललर हो। यो ब्रान्ड नाममा तत्काल रिलीज (नुकिन्टा) वा विस्तारित-रिलीज ट्याब्लेट (नुकिन्टा ईआर) को रूपमा उपलब्ध छ।
ऑक्सीकोडोन भनेको के हो?
अक्सीकोडोन एक मादक पेन्टकिलर हो जुन गम्भीर दुखाईको उपचार गर्न प्रयोग गरिन्छ। यो जेनेरिकमा तत्काल रिलीज ट्याब्लेट वा क्याप्सुलको रूपमा र ब्राण्ड-नाममा लामो अभिनय Oxycontin को रूपमा उपलब्ध छ।
के ‌न्युकाइन्टा र अक्सीकोडोन एकै हुन्?
होईन, तर ती समान छन्। न्यूकेन्टामा टेपेन्टाडोल हुन्छ। ऑक्सीकोडोन र टेपेन्टाडोल दुबै ओपिओड एनाल्जेसिक्स (पेन्किलर) हो तर तिनीहरूसँग केहि भिन्नताहरू हुन्छन्, जस्तै खुराक, मूल्य, र साइड इफेक्टहरू, माथि उल्लेखित।
के ‌न्युकाइन्टा वा अक्सीकोडोन राम्रो छ?
मा दुई औषधि तुलना अध्ययन , नुकिन्टा र अक्सीकोडोन त्यस्तै सुरक्षित र कम फिर्ता दुखाइको उपचारमा प्रभावकारी थिए। Nucynta हुन सक्छ कम दुरुपयोग सम्भावना । यदि डाक्टरसँग कुरा गर्नुहोस् यदि नुकिन्टा वा अक्सीकोडोन तपाईंको लागि उपयुक्त छ भने, यदि अन्य दुखाइ हटाउने व्यक्तिहरूले सहयोग गरेका छैनन् वा यदि तपाईं उनीहरूलाई सहन सक्नुहुन्न भने।
के म ‍न्युइन्टा वा अक्सीकोडोन गर्भवती हुँदा प्रयोग गर्न सक्छु?
होइन, नुकिन्टा वा अक्सीकोडोन (वा कुनै ओपिओइड, जस्तै पर्कोसेट) ले निम्त्याउन सक्छ नवजात परहेज सिंड्रोम , जुन बच्चाको लागी खतरनाक वा घातक हुन सक्छ।
म ‍न्युकाइन्टा वा मदिराको साथ अक्सीकोडोन प्रयोग गर्न सक्छु?
सं। Nucynta वा oxycodone साथ रक्सी गम्भीर साइड इफेक्टको जोखिम बढाउन सक्छ जस्तै श्वासप्रसाद उदासीनता (पर्याप्त अक्सिजन नहुदा, र तपाईंको सास फेर्न धीमा हुन्छ) र कोमा वा मृत्युसमेत हुन सक्छ।
क्लोनोपिन र xanax बीच के भिन्नता छ?
नुकिन्टाभन्दा शक्तिशाली के छ?
ओपियोड्सको उच्च खुराक ओभरडोज र मृत्युको उच्च जोखिमसँग सम्बन्धित छ, को अनुसार CDC । ओभियोड्सको दैनिक दैनिक खुराक हेर्नु महत्त्वपूर्ण छ र अधिक खुराकको जोखिम र निकट अनुगमनको आवश्यकता गणना गर्न MME (मोर्फिन मिलिग्राम समकक्ष) मा रूपान्तरण गर्नु महत्त्वपूर्ण छ। यदि Nucynta को खुराक को लागी तपाइँ को लागी काम गरीरहेको छैन भने, तपाइँको डाक्टर संग डोज परिवर्तन वा औषधि परिवर्तन गर्ने बारे कुरा गर्नुहोस्। तपाईको डाक्टरसँग कुरा नगरीकन, डोज आफै बढाउनुहोस्। एकको लागि ओपिओइड कहिल्यै नलगाउनुहोस् यो निर्धारित गरीएको बाहेक अन्य प्रयोग गर्नुहोस् ।
Nucynta ट्रामाडोल जस्तै छ?
नुकिन्टा बलियो छ र ट्रामाडोल भन्दा बढी लत सम्भावना छ uc नुकिन्टा एक तालिका दोस्रो औषधि हो, जबकि ट्रामाडोल एक तालिका IV औषधि हो। नुकिन्टा ट्रामाडोल भन्दा पनि महँगो छ, जुन दुवै जेनेरिक र ब्रान्ड (अल्ट्राम) मा उपलब्ध छ। धेरै बिरामीहरूले ट्रामाडोलले उनीहरूको दुखाइ नियन्त्रण गर्न पर्याप्त पाउँदछन्।
Nucynta वजन वजन को कारण छ?
न्यूकेन्टा ईआर फेज २ र clin क्लिनिकल परीक्षणहरूमा १% भन्दा पनि कम बिरामीहरूसँगaतौल घट तर तौल घटाउन को राशि रिपोर्ट गरिएको छैन।
के तपाई zyrtec र benadryl एक साथ पित्तीमा लिन सक्नुहुन्छ?
खाए पछि उच्च रगतमा चिनीका लक्षणहरू
जुन राम्रो क्लेरिटिन जीरटेक वा मुलुक हो
सबै जन्म नियन्त्रण बीमा संग नि: शुल्क छ
प्रति महिना जन्म नियन्त्रण गोलिहरूको औसत लागत
तपाइँको प्रणालीमा क्लेरिटिन कसरी लामो समय सम्म रहन्छ